Izindaba - Yimaphi amacansi emoto aluhlobo okulula ukuwahlanza?
Izinto ezahlukahlukene nezakhiwo amacansi emoto anezindlela ezahlukahlukene zokuwasha.
Ubulukhuni bokuwashwa buhlukile, omata bezimoto manje sebevame ukuba nalezi zinto ezihlukile: ukhaphethi, amacansi emoto enjoloba, amacansi emoto e-PVC namata wezimoto ze-TPE / TPR.
Ake sichaze ukuthi yini ehlukile endleleni yokuwasha omata bezimoto:
Carpet ukhaphethi : iningi lesitolo sezimoto lizonikeza ukhaphethi nemoto uma ulithenga, izolingana kahle izimoto, futhi ibukeka yinhle ekuqaleni, kepha ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, izongcola kakhulu, futhi kunzima ukuyihlanza kahle , ayinamanzi, futhi udinga ukulinda ukuthi yomile ukuze uyibuyisele emotweni yakho, empeleni akulula ukuyenza.
5D PVC Isikhumba ngokwezifiso car mata, Sekuyiminyaka sithandwa, ngoba isikhumba sibukeka amacansi emoto kanokusho, Sithandwa ngabanikazi bezimoto kule minyaka edlule.sikiwe futhi yathungwa namamodeli ezimoto, ngakho-ke ibuye ilingane kahle imoto futhi ingakhiqiza nge-MOQ ephansi, isikwe nje ngomshini futhi yathungwa yisisebenzi, yonke ifektri yama-car car ingakhiqiza zonke izinhlobo zezimoto. Kepha omata bezimoto ze-PVC kulula ukukhipha iphunga elinoshevu lapho kushisa ehlobo, futhi lizophuka ngemuva kokuligeza izikhathi ezithile. Bambalwa kakhulu abantu abayisebenzisayo manje.
Omata bezimoto zenjoloba, inzuzo enkulu kunazo zonke intengo eshibhile, futhi ungayisika ukuze ilingane nemoto yakho, kepha le nto ayiyilimazi imvelo, futhi ngemuva kokuyisebenzisa izinyanga ezithile, izoklebhuka, inamathele, iqine, ithambe, ibe yimpuphu, ibala, ibunjiwe, izobukeka ingcolile kakhulu. Ngakho-ke asiphakamisi ukuthi sisebenzise lo mbhede wezinto ezibonakalayo manje.
Izinto ezintsha zokuvikela ezemvelo i-TPE, i-TPR zisetshenziswa kakhulu kumata phansi. Futhi ayinalo iphunga ekushiseni okuphezulu, okuvuselelwa kabusha, anti-slip, ukumelana nokugqoka, izici ezingangeni manzi. Ngoba izinto ze-TPE azidingi noma yimuphi umenzi wezithasiselo.
Futhi omata bemoto be-TPE baklanywe nge-3D, inokuthungwa phezulu kuzothuthukisa amandla wokuphambana futhi uhlangothi oluphezulu oluzungezile lungavimbela ukuvuza kwamanzi, livikele imoto ngaphakathi. Ukukhubazeka kwamata wezimoto ze-TPE ngabe kudingeka ukuthuthukisa isikhunta semoto ngayinye ehlukile, kuzothatha isikhathi eside futhi kubiza kakhulu ukuyithuthukisa. Uma ungathola amacansi ezimoto owadingayo ezintweni ze-TPE emakethe, unganqikazi uku-oda wona, uzowathengisa impela.
Ngaphezu kwakho konke, amacansi ezimoto e-TPE ne-TPR kulula ukuwahlanza futhi alungele imindeni enezingane, akunangozi empilweni.
Uzokonga isikhathi ukugeza omata bezimoto ze-TPE, idinga kuphela imizuzu engu-2 ukuyigeza ihlanzekile ngokuphelele.
Omata bezimoto ze-TPE omata bezimoto abahlanzekile kakhulu.
Ungayisebenzisa kanjani imata yakho yaphansi yemoto ngo-20 yebo ...